ဟိုတယ်များ ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် အပေါ် Realtyww Info
ဟိုတယ်များ in Costitx
1 - 10 ၏ 721 စာရင်းများ
Hotel In City Dikorfo
Papigo, Zagori, hotel complex of 600 sq.m., ground floor - elevated ground floor - 1st - 2nd, corner, 8 master bedrooms, 8 bathrooms, traditional, villa, stone, furnished, onaplot of 980 sq.m., autonomous heating, fireplace, unlimited view mountain - forest, warehouse of 80 sq.m, garden of 380 sq....
Dikorfo in Epirus And Western Macedonia (Greece)
ထုတ်ဝေသည် Maria Yurchenko
မြင်ကွင်း ဟိုတယ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
Hotel In City Chania
For saleaHotel type 'furnished apartments' of category2* (NANA), capacity according to the Hellenic Tourism Organization mark 40 beds / 23 rooms, conventional construction, within the limits of settlement Kato Daratso D. Chania, which consists of2two-storey buildings with basement, building A ...
Chania in Crete (Greece)
Hotel In City Kerkyra
Corfu, Kato Korakiana. For saleahotel complex, located on two plots of land of 1467,23 sq.m. and 2465,85 sq.m. with separate entrance. it can also be used asaresidential complex as it consists of fully furnished and equipped apartments. There isapossibility for building another 1,100 sq.m. Als...
Kerkyra in Corfu (Greece)
Property Code: 25300-5690 - Exclusivity FOR SALE 20 Spaces, Hotel of total surface 370 sq.m, on the Ground floor Center. The property comprises 20 Spaces,5Bathrooms. and it is also features View of the Sea, Window frames: Wooden, Parking, Storage Space, Garden, Closet, Open, Bright, Balconies 25 s...
ထုတ်ဝေသည် Karagiannis Ioannis And Sia O.e.
ထုတ်ဝေသည် P. Giannakis, Mrics
This completely self-sufficient Mallorcan country estate with agrotourism licence is situated in the middle ofa2 hectare large natural and cultural landscape between young olive plantations, citrus trees, lavender and oleander groves and landscaped gardens on the edge ofanature reserve. On the s...
မြင်ကွင်း ဟိုတယ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သည်2days ago
ဟိုတယ်တစ်လုံးသည်ခဏတာအတွက်လခတည်းခိုရန်ထောက်ပံ့ပေးသောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်းတစ်ခန်းတွင်အရည်အသွေးညံ့သောမွေ့ရာမှသည်ပိုမိုကြီးမား။ အရည်အသွေးမြင့်သောကုတင်များ၊ ဆေးထည့်သည့် ၀ တ်စုံ၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့်အခြားမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကူရှင်ချုပ်ထားသောကုလားထိုင်များ၊ အသေးစားစျေးနှုန်းချိုသာသောဟိုတယ်များသည်အခြေခံအကျဆုံး guest ည့်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အဆောက်အ ဦး များကိုသာပေးနိုင်သည်။ ပိုမိုကြီးမား။ စျေးကြီးသည့်ဟိုတယ်များသည်ရေကူးကန်၊ စီးပွားရေးစင်တာ (ကွန်ပြူတာများ၊ ပရင်တာများနှင့်အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ)၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ညီလာခံနှင့်ပွဲရုံများ၊ တင်းနစ်သို့မဟုတ်ဘတ်စကတ်ဘောကွင်း၊ အားကစားရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ function ကိုဝန်ဆောင်မှု။ ဟိုတယ်ခန်းများသည်များသောအားဖြင့် room ည့်သည်များအားသူတို့၏အခန်းကိုခွဲခြားသိမြင်စေရန်ခွင့်ပြုရန် (သို့မဟုတ်အချို့သောသေးငယ်သည့်ဟိုတယ်များနှင့် B & B များတွင်ဖော်ပြထားသည်) ကိုရေတွက်ကြသည်။ အချို့သောဖက်ရှင်ဆိုင်များ၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်များသည်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအခန်းများရှိသည်။ ဟိုတယ်အချို့သည်အခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အစားအစာများကိုပူဇော်ကြသည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဟိုတယ်တစ်ခုသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း guests ည့်သည်အားလုံးအားအစားအစာနှင့်အချိုရည်များထောက်ပံ့ရန်ဥပဒေအရလိုအပ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဆေးတောင့်ဟိုတယ်များသည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းသုံးခန်းအတွက်သာသင့်တော်သောအခန်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။